Machine Kudzidza | Kuongorora Dhata | Zvekushandisa uye Iterative maitiro - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Machine Kudzidza Technology
Machine pakudzidza itsika yekuongorora kwedhata inogadzira analytical modeli yekuvaka. Muchina wekudzidza uyo unogara uchidzidza kuchengetedza zviito zvawo nemazvo uye nekunzwisisa kutsva ichokwadi machine learning system. Iyo data inopihwa mumuchina wekudzidza nezvose zviito uye zvisiri zvekuita mafidha uyezve iro basa rinowana otomatiki pasina kugara kuchingoda kupindirwa kwevanhu kana kwebhuku. Machine pakudzidza yakabvumidza makomputa kuwana ruzivo rwakavanzika, vachishandisa maalgorithms anogara achitora kubva kune data ravanopihwa, pasina kurongedzwa zvakajeka kwekutarisa. Machine pakudzidza inogona kufumura marongero matsva uye nekugadzira mune akasiyana masisitimu anosanganisira IT, hutano, zvigadzirwa, simba uye kunyangwe dzidzo. Izvo zvisingaenzaniswi zviyero zvekugona zvaizosvikwa mumabhizimusi masystem neayo ekuzvidzidzira-algo's, uye padanho rega, iwo akangwara gadget aigona kutitungamira isu kune zvese uye kubatsira kurerutsa hupenyu hwedu. Machine pakudzidza isainzi isiri iyo nyowani asi iri kuwedzera nyowani nyowani izvozvi.
Mushandisi wekudzidza muchina
Machine pakudzidza nhasi haina kumbobvira yamboita sezvainge zvakaita munguva yakapfuura, nekuda kweiyo nyowani komputa matekinoroji. Sezvo mamodheru aratidzwa kune data nyowani, iyo iterative chimiro che machine learning yakakosha sezvo ivo vachigona kuchinjira vakazvimiririra. Ivo vanogadzira zvinodzokororwa, zvakavimbika mhedzisiro uye sarudzo nekudzidza kubva kumakomputa apfuura akapihwa kwavari. Machine pakudzidza akaberekwa nepfungwa yekuti makomputa anokwanisa kudzidza asina kunyatso gadzirirwa chero basa chairo kuti rishande, ndiko kuziva maitiro uye vaongorori vari kuronga nzira dzekuona kana makomputa aigona kudzidza kubva kudhata kuburikidza chakagadzirwa njere. Vanhu vakamutsidzira kufarira machine learning sezvakangoita Bayesian ongororo uye date kuchera kune zvishoma zvinhu senge inokwanisika kuchengetedza data, yakasimba uye yakachipa computational kugadzirisa uye kukura mhando uye mavhoriyamu e data iripo. Zvose izvi zvinhu zvakaita kuti zvikwanisike kuti zvive nyore uye nekukurumidza kuvaka mamodheru anogona kuongorora data yakaoma uye yakakura uye kuunza mhinduro dzakarurama uye dzinokurumidza pamwero mukuru kana zvichidiwa. Nekugadzira mamodheru chaiwo, mabhizinesi nemasangano vane mukana wakanaka wekuona mikana inobatsira uye yakabudirira uye kuderedza njodzi nekudaro kugadzira. machine learning chinhu chakakosha mumaindasitiri makuru.
Machine pakudzidza inofambisa masystem ekuziva kuita, kufunga uye kudzidza nesu nenzira yakasarudzika uye yemusikirwo. Funga nezvekutengesa kwemasheya, kurudziro yemabhaisikopo eNetflix, kushambadza kweInternet kunoratidza zvinoenderana nemaitiro edu ekubhurawuza - iyi yese mienzaniso yekuti sei. machine learning iri kutibatsira kuongorora nyika nenzira dzine simba uye dzekugadzira. Kare, shanduko munhoroondo yevanhu yaive shanduko yemaindasitiri iyo yakagonesa maindasitiri kuunza mamwe mabasa kuburikidza nekubudirira zvakanyanya uye nekudaro kusimudza mwero wese wekurarama. Nhasi, machine learning ndeimwe shanduko yakadaro iyo nyika ichatarisana nayo. Isu tiri padanho re automation uye chakagadzirwa njere kuve mutambi akakosha uye kana zvinhu zvikaitwa nemazvo, machine learning yaizobatsira makambani kukura mabhizinesi avo uye kugadzira ruzivo ipapo ipapo. Kufanana neiyo Industrial Revolution, chinhu chakakosha che machine learning kubatana- tingada vashandi vane hungwaru pamwechete vachishanda kuti vabudirire maitiro vachipa zvinobuda zvakanaka. Vashandi vari kutaurwa pano vangave nevainjiniya vedata, vagadziri veIT, vashandisi vebhizinesi, data masayendisiti, date kuchera nyanzvi, vatariri vehurongwa, vatariri, vanogadzira, nezvimwe.
Isu tinonyatsoziva nezve machine learning zvikumbiro zviri kuitika muhupenyu hwedu nhasi. Kwenguva yakareba, iyo algorithms ye machine learning zvanga zviripo asi izvo zvichangoburwa kuve kugona kushandisa otomatiki masvomhu akaomesesa masvomhu kune hombe data, nekukurumidza uye nekudzokorora uye zvakare. Mumwe wemienzaniso yatinotoziva ndeyekuzvityaira mota yeGoogle, iyo yaive yakanyungudika uye yakavakirwa pa. machine learning. Iyo ine ese maficha emota yemazuva ano yakasanganiswa senge adaptive cruise control, kupaka uye navigator vabatsiri, kuziva mutauro uye mubatsiri wenzira inoita kuti ive pedyo nemotokari yakasununguka yakasununguka. Zvakare kurudziro yepamhepo inopa senge kubva kuNetflix neAmazon, kuona hutsotsi uye kusanganisa machine learning nekugadzirwa kwemitemo yemitauro kuti uzive izvo vatengi vari kutaura pamusoro pako pa Twitter, Nanotronics, iyo inogadzirisa mamicroscopes ekuongorora kwakagadziridzwa, Rethink Robotics vachishandisa iyo kuvandudza kukurumidza kwekugadzira kwavo uye kudzidzisa maoko avo erobhoti, kuwedzera kurongeka kwevatengi, kufanotaura kukosha kwehupenyu hwemutengi. , kuvandudza ruzivo rwemushandisi mu-app, kuona matengero evatengi, kuongorora njodzi dzehutano, kuvandudza hutano hwemunhu, uye kuongorora zvirwere nenzira kwayo, yese mifananidzo yemazuva ese machine learning.
Chakanaka machine learning sisitimu inogadzirwa neyekutanga uye yepamusoro algorithms, scalability, data kugadzirira kugona, ensemble modhi uye otomatiki uye iterative maitiro. Machine pakudzidza nguva pfupi yadarika yanyanya munhau nekuda kwekufambira mberi kwayo mu "kudzidza zvakadzika” izvo zvinosanganisira kukundwa kwayo kwakakurumbira kweAlphaGo kwaGo sekuru Lee Sedol uye zvimwe zvigadzirwa zvitsva zvinokatyamadza zvakatenderedza muchina kududzira uye kuzivikanwa kwemifananidzo. Machine pakudzidza inoshandisa huwandu hukuru hwe data, inonyanya kuregerera yekuchinja data data kana paramita uye inotsigira kuoma kukuru uye kusiyanisa. Iyo inogadzirwa inobuda nemaitiro aya inogona kushandiswa zvisina musono pamapuratifomu akawanda akasiyana, senge analytics masisitimu, gore kadambari, edge network uye embedded systems. Shanduko yenhanho kubva panguva iyo ruzivo rwainyanya kufambiswa tekinoroji papuratifomu kuenda kunguva yekuziva, iyo inogonesa bhizinesi-inotungamirwa ruzivo. Machine pakudzidza, IoT neAI dzinenge dzakabatana. IoT inozadzisa zvakanaka chakagadzirwa njere kana zvasvika kune chaiyo-nguva komputa. Rudzi rwomunhu rwaizokurumidza kutsiviwa chose chose nemichina yokufamba iyo yaizova yakangwara zvikuru kupfuura zvatiri. Iwo michina akatotanga kupinda mumabhizinesi nekuda kwezvakasiyana zvinangwa uye munguva iri kuuya, taizoona mafungu ekushandurwa kwemichina achichinjisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva zvakare. Idzi dynamos dzevanhu dzinochinja nzira dzedu dzekutarisa kuhupenyu nekuvaka maonero kubva kune data ravanogamuchira uye nenzira idzo vanhu vasina kumbogona. Izvi zvaizoreva kuti michina inozobuditsa simba revanhu mune zvese zvinhu zvinokonzeresa shanduko, kudhura kwemutengo uye hukuru uye hwakasimba huwandu hwemagetsi. Mifananidzo neizwi kucherechedzwa masisitimu anozoziva vanhu munzira dzakasiyana siyana uye maererano neongororo, makambani ari kukura nekukurumidza achange aine michina yakangwara kupfuura vashandi.
Mienzaniso yeMuchina Kudzidza
Kunyanya kune marudzi matatu akasiyana e machine learning izvo zvinotariswa, zvisingatarisirwi, uye zvinosimbisa kudzidza. Izvi zvinosarudzwa zvichienderana nebasa rekupedzisa uye nyore kwekuita.
Mukudzidza kwakatariswa, iyo algorithm yekudzidza yakatopihwa mhinduro uku uchiverenga iyo data inova mhedzisiro chaiyo yenzvimbo yega yega yedata yakanyorwa zvakajeka kana uchidzidzisa modhi. Inovavarira kutsvaga hukama pane kutsvaga mhinduro kuitira kuti igone kufungidzira kana kupatsanura mapoinzi e data kana nzvimbo dzisina kupihwa dhata dzakatangwa.
Mukudzidza kusingatarisirwe, algorithm yekudzidza haina kupihwa mhinduro panguva yekudzidzira uye kukosha kwacho kuri mukutsvaga kuwirirana uye mapatani. Inovavarira kutsvaga hukama hune musoro pakati penzvimbo dze data.
Rudzi rwekupedzisira ndeyekusimbisa kudzidza kunova musanganiswa pakati pekudzidziswa nekutariswa. Inoda kubatanidzwa kune zvakatipoteredza uye inoshandiswa kugadzirisa matambudziko akaomarara kupfuura ekare maviri. Mienzaniso mishoma ine mukurumbira ndeye backgammon, poker, uye Go, ndiyo mitambo yemafungiro uye dhata inopihwa nharaunda kuti mumiriri apindure uye adzidze ega.